Aluminium profile extrusion zvikamu Vagadziri uye Vatengesi - Yakachipa Aluminium profile extrusion zvikamu Fekitori
Aluminium alloy isiri-ferrous simbi mamiriro ezvinhu.
Aluminium alloy ine yakaderera density asi yakasimba kwazvo simba, iri padyo kana kupfuura iyo yemhando yepamusoro simbi. Iyo ine yakanaka mapurasitiki uye inogona kugadziriswa kuve akasiyana profiles. Iyo ine yakanakisa magetsi kuitisa, kupisa kwemagetsi uye kurwisa kurora. Inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri uye mashandisiro ayo ndeyechipiri kune simbi chete. Mamwe maaluminium alloys anogona kurapwa kupisa kuti awane akanaka michina zvivakwa, zvemuviri zvimiro uye ngura kuramba.
Iko kuvandudzwa kwealuminium alloy madhoo nemahwindo Iyo aruminiyamu chiwanikwa madhoo nemahwindo, kuvaka keteni rusvingo indasitiri iri nyowani nyowani indasitiri munyika medu, kubva pakutanga, kubva kudiki kusvika kune yakakura, yakawana kukurumidza kukurumidza nekusvetuka nemipendero.
Aluminium alloy ndiyo inonyanya kushandiswa isiri-ferrous simbi mamiriro ezvinhu muindasitiri, uye yanga ichishandiswa zvakanyanya mukubhururuka, muchadenga, mota, kugadzira michini, kuvaka zvikepe nemakemikari maindasitiri. Aluminium alloy inogona kusarudzwa.
Simba harifananidzike neya 2XXX akateedzana kana 7XXX akateedzana, ayo magnesium uye silicon alloy hunhu hwakawanda. Iyo ine yakanakisa yekugadzirisa mashandiro, yakanakisa kuwelda hunhu uye electroplating zvivakwa, uye yakanaka kuramba. Ngura, kukwirira kuoma, hapana kushanduka mushure mekugadziriswa, compact zvinhu zvisina kuremara uye kupora kuri nyore, nyore firimu firimu, yakanakisa oxidation mhedzisiro, nezvimwe.
Chero ani anonzwisisa hunhu hwealuminium anoziva kuti kemikari chiitiko chealuminium mune chiwanikwa chinoshanda zvakanyanya, uye inogona kupindura nekukurumidza nemojeni mumhepo kuti iite dhi dhi yekudzivirira yealuminium oxide.
Dhizaini yewaya inogona kuitwa tsanga dzakatwasuka, zviyo zvisina kujairika, shinda, yakakora uye inamera zviyo maererano nezvinodiwa zvekushongedza.
6016 aruminiyamu chiwanikwa kupisa kurapwa CNC machine zvikamu
Iyo yekupisa kurapwa kwealuminium alloy castings ndeyekusarudza imwe yekupisa yekurondedzerwa, kudzora mwero wekupisa kukwira kune imwe tembiricha kweimwe nguva yenguva uye kutonhorera pasi pane imwe nhanho yekuchinja chimiro cheiyo chiwanikwa.